Manabaribary ny Toetran’ny Fahalalahàna miteny Ao Espaina Ny Fandoavana Sazy Noho Ny Sary Namboarina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Avrily 2018 12:52 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, Ελληνικά, English, Nederlands, Español
Le montage qui a valu à un jeune homme de Jaén une amende pour « offense aux sentiments religieux ». Photo publiée par laicismo.org et utilisée avec autorisation. / Ilay sary namboarina nandoavan'ilay tovolahy tao Jaén sazy noho ny «fanafintohinana ara-pivavahana». Sary nozarain'i laicismo.org ary fampiasàna nahazoana alàlana.
[Mamerina any amin'ny pejy amin'ny teny espaniola ny rohin'ity lahatsoratra ity.]
Efa ho herintaona izay, namoaka ny sarin'ny tarehiny tao amin'ny El Despojado tamin'ny kaontiny Instragram i Daniel Serrano, sarisokitr'i Kristy izay an'ny fikambanana ara-pivavahan'ny Amertume, ampiasaina ho an'ny fitanjozorana rehefa Herinandro masina ao amin'ny tanànan'i Jaén, ao Espaina.
Toy ny voalazan'ny gazety mivoaka isanandro Diario de Jaén, nangatahan'ilay fikambanana ara-pivavahana ilay tovolahy mba hamafa ilay sary ao amin'ny kaontiny , saingy nolaviny satria noheveriny fa tsy nanafintohina ilay sary namboarina. Nanapaka hevitra ilay fikambanana ny hametraka fitoriana teny amin'ny fitsaràna ary nahita mpitsara nanaiky ny fitarainany.
Ary koa, tsy nijanona tamin'ny famaritana ilay zava-misy ho “fanamavoana sy fanesoana mazava atao an'ilay fikambanana mpivavaka” fotsiny ny mpampanoa lalàna, fa nanampy hoe nikendry ny “haneso ny fihetsehampo ara-pivavahana ananan'ireo mpikambana ao” ilay sary ary nitaky onitra 2160 euros na sazy 180 andro any am-ponja ho an'i Daniel Serrano raha tsy afaka handoa io vola io.
Manoloana ny tahotra ny hiditra am-ponja, nifanaraka tamin'ny manampahefana ilay tovolahy ary nanaiky ny haneho ny fialantsininy sy handoa ilay sazy 480 euros.
Nahita i Daniel Serrano, mpiasa mpisolo toerana ao amin'ny fambolena oliva, fa mitovy lanja amin'ny 10 andro fiasana ilay vola nangatahana aminy .
Fanehoankevitra teny anaty tambajotra sosialy
Nanonja be tety anaty aterineto io fanapahankevitrin'ny fitsarana io ary nahatonga onjan-katezerana sy firaisankina ho an'ilay tovolahy. Niseho tamin'ny famoriambola izay tao anatin'ny ora iray dia nahavita nanambatra mihoatra noho izay nilaina handoavana an'ilay sazy ny fanohanan'ny mpampiasa aterineto .
Ary manampy an'izany, nahatonga vokatra Streisand ny hatezeran'ny fiarahamonina : Raha toa ka ny hanampenana an'ilay sary no nokendren'ilay fikambanana mpivavaka, lasa niparitaka be ilay izy avy eo teo amin'ny aterineto. Nandritra ny ora faramparany teo, lasa naverina sy naparitakin'ireo fitaovampifandraisana rehetra sy, teo amin'ny Twitter, nahitana firoboroboan'ny sary mampihomehy an'i Kristy sy sarin'i El Despojado, miaraka amin'ny tarehy hafahafa.
Nahazo 480 euro ianareo, saingy manaporofo zavatra kely tsy misy dikany ianareo. Ny vokatra Streisand miaraka amin'ny tarehin'i Kristy: mikomy manoloana ny onitra nangatahana aminà tovolahy noho ny fanamboarana sary ny aterineto.
Kristy Mangidy, izay tsy mangidy intsony. Izao izy antsoina hoe Yisus B Boy ary mahafinaritra be !
Nanamboatra pejy teo amin'ny aterineto ny mpampiasa Twitter Carlos Vidal Ojea mba hahafahan'ny rehetra mametraka ny tarehiny eo amin'ilay sarin'i Kristy.
Nanao an'ilay fanamboarana sary koa i Joaquín Urias, mpitsara taloha tao amin'ny Tribonalin'ny lalàmpanorenana, mba hampahafantatra ny rehetra fa zo malalaka ny fahalalahana maneho hevitra
Ka satria hitako fa tafahoatra ny manasazy tovolahy noho ny nanamboarany ny sarin'ny tarehiny eo amin'ny an'i Kristy… Manaraka azy aho. Haja ho an'ny Ministerambahoaka !
Eo ambanin'ny fanalehibeazana daholo
Tsy voalohany teo amin'ny resaka fanafihan'ny fahalalahana maneho hevitra ao Espaina ity raharaha ity. Nanomboka tamin'ny 2015, tamin'ny fanavaozana ny andininy 525 amin'ny Fehezandalàna famaizana izay manasazy amin'ny “onitra 8 katramin'ny 12 volana ho an'ny olona izay manodinkodina ho esoeso, mba hanambaniana ny fihetsempon'ny mpikambana ao anatin'ny fikambanana ara-pivavahana iray, na am-bava na an-tsoratra na fomba hafa ny antontantaratasy, fotopinoana, finoana, fombampivavahana na lanonampivavahana, na manala-baraka, imasombahoaka, ireo mpino”
Drag Sethlas tao amin'ny Gala Drag Queen 2017. Sary an'ny eldiario.es, lisansa CC BY-SA
Ny fanjavozavoan'ny lalàna dia midika fa mbola miankina amin'ny fijerin'ny olona ny haavon'ny “esoeso” ary miankina amin'ny fandikàn'ny mpitsara ny zavatra itoriana, ary lasa mitondra tsy fahatokisana goavana ny fitsarana izany.
Manazava ao amin'ny eldiario.es i Isabel Elbal, mpampianatra momba ny Lalàna famaizana, fa afaka toriana amin'ny raharaham-pitsaràna sivily ireo atao hoe “fahadisoana” kely ireo, na dia kely aza ny sazy mihatra. Ankoatra izay, ny raharaham-pitsaràna sivily dia ny olona voakasika ihany no afaka manao azy. Misokatra ho an'ny fiampangana manokana ny raharaham-pitsaràna famaizana, izay, rehefa niampy ny tsy fahamatoran'ny lalàna, mitondra ny olona sy ny vondron'ny farany ankavanana indrindra, na manakaiky ny fanompoana tafahoatra, hitory noho ny antony tsy misy dikany.
Toy izany, ohatra, ny momba ilay raharaha (tsy nasiana tohiny taty aoriana) nahazo an'i Dani Mateo sy Gran Wyoming, notorian'ny Fikambanana ho an'ny fiarovana ny Valle de los Caidos (‘lohasahan'ireo lavo”), fasana tsangambato natsangana ho an'ny maherifo taorian'ny ady sivily espaniola izay hipetrahan'ny fatin'i Franco, noho ny fanehoankevitra maneso momba ny endrik'ilay hajo fijaliana lehibe manaingo io toerana io.
Ny Fikambanana espaniola misy ireo mpisolovava kristianina ihany koa no niandohan'ireo fiampangana maro izay nameno ny vaovao, tahaka ny tamin'ny herintaona, nitory an'i Drag Sethlas noho ilay fampisehoana nataony ary nahazoany ny Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas tamin'ny 2017. Tsy nasian'ny mpitsara tohiny io fitarainana io no niafaràny. Tsy nanana an'izay vintana izay anefa ny mpandray anjara fototra tamin'ilay filaharan'ny « Santísimo Coño Insumiso », satria naverin'ny Fitsaran'ny Séville nosokafana indray ny raharahany taorinan'ny nanaovan'ity fikambanana ity ihany fampakarana ho fanafoanana ny fanajanonana an'ilay raharaha.
Petadrindrin'ny fetben'ny La Coruña tamin'ny 2017. Sary an'i eldiario.es, nampiasàna ny lisansa CC BY-SA.
Fa iray amin'ireo raharaha tena nahatalanjona ny fitoriana napetraky ny filohan'ny Fikambanan'ireo vehivavy maty vady ao Lugo manenjika ny mpanolotsaina miandraikitra ny kolotsaina ao La Coruña noho ny petadrindrina ho an'ny fetiben'ny tanàna, izay mampiseho olona manao endrikin'ny Papa, no raharaha izay afaka atao hoe anisan'ny nahagaga. Fitarainana iray tsy nasiana tohiny koa.
Na dia tsy nisy tohiny ara-tsazy aza ny ankamaroan'ireo raharaha ireo, betsaka ireo hafa no nitondra sazy masiaka isankarazany, miaraka amin'ny sandany ara-tsaina sy ara-bola izay aterak'itony karazana fitoriana itony ho an'ireo olona izay ny hany hadisoany dia ny nampiharany ny zony hiteny malalaka, izay arovan'ny lalàmpanorenana.
Tao amin'ny lahatsorany ¡Menudo Cristo! ¿Qué hacemos con el delito de blasfemia?, mihevitra i Joaquín Urias , mpampianatra lalàmpanorenana, fa mifototra loatra amin'ireo fitsipika sy ireo soatoavina frankista ny raharaha ara-pitsarana espaniola.
Ny sata ipetrahan'ilay zavamisy ara-pivavahana, indrindra fa katolika, dia manome alalana an'io ho alaina matetika ihany koa ho anaty kajikajy mba haneriterena ny fahalalahana maneho hevitra.
Omen'ny fehezan-dalàna famaizana fahafahana ny hanohizana ny fanafintohinana atao amin'ireo mpanaraka finoana iray, saingy an'ireo mpino ny fahafahana mamaritra ny hoe inona no manafintohina.